मधेश आन्दोलन राजनीतिक समस्या, सीमाअवरोध कुटनीतिक - Ratopati
मधेश आन्दोलन राजनीतिक समस्या, सीमाअवरोध कुटनीतिक
| विजयकुमार गच्छदार, उपप्रधानमन्त्री तपाई सरकारको उपप्रधानमन्त्री मधेशको अहिलेको समस्याको बारेमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
–म मात्रै होइन, पुरै सरकार मधेश आन्दोलनको बारेमा निकै गम्भीर देखिएको छ । पछिल्लो समय ओलीजीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले वार्ताको पहल गरेर वार्तालाई सकारात्मक मोडमा पुर्याएको छ । यही सरकारको पालामा प्रथम पटक वार्तामा आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गरेको छ । राजनीतिक रुपमा समस्या समधान गर्न विषयले प्रवेश पाएको छ । दुई पक्षबीच जुन रुपमा वार्ता भएको थियो त्यो निकै सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको थियो तर बीचमा वीरगञ्ज घटना भएको कारणले अलि अविश्वासको वातावरण सृजना भएको छ ।
हालसम्मको वार्तामा के के उपलब्धि भयो त ?
–पहिलो कुरा वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढ्नु नै उपलब्धि हो । अर्को कुरा, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र सविधानमा राख्नका लागि संशोधनको तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै आन्दोलनकारीले राखेको पाँच बुँदे शर्तमा अधिकाँश पूरा भइसकेको छ । केही बाँकी छ त्यसको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
के के पूरा भयो त ?
–मृतक परिवारलाई दिने भनिएको १०–१० लाख रुपैयाँ दिने काम शुरु भएको छ । केहीलाई दिइएको पनि छ र केही बाँकी छन् । त्यसलाई पनि दिने प्रकृया शुरु भएको छ । आन्दोलनमा घाइते भएकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने कुरा पनि निर्णय भइसकेको छ । थारु आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको झूठा मुद्दाहरु पनि फिर्ता लिने प्रकृया शुरु भएको छ । अरु बाँकी विषयमा पनि सरकारले छलफल गरिरहेका छ ।
मधेशको आन्दोलनलाई समाधान गर्न सरकारले के सोचेको छ ?
–तराई मधेशमा जारी आन्दोलनलाई राजनीतिक र कुटनीतिक ढंगबाट समाधान गर्नुपर्छ । र, सरकारले त्यसतर्फ गम्भीर ढंगबाट सोचिरहेका छन् । मधेशको आन्दोलन राजनीतिक समस्या हो तर अहिले देखिएको सीमा अवरोध राजनीतिक समस्याको साथ साथै कुटनीतिक समस्या पनि रहेकाले त्यसलाई त्यसै ढंगबाट समाधान गर्नुपर्छ । मधेशको अहिले मुख्य राजनीतिक समस्या भनेको सीमांकन हो र यसलाई राजनीतिक सहमतिबाट टुग्याउनु पर्छ ।
सीमा अवरोध कुटनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभयो के नाकाबन्दी भारतले लगाएको हो त ?
–मैले पहिलादेखि भन्दै आएको के हो भने सीमा अवरोध दुईतिरबाट भएको हो । मैले भारतले गरेको हो भनि भन्दिन तर नाका आन्दोलनकारीबाट र सीमापारीबाट पनि अवरोध भएको हो । र यसलाई कुटनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्छ ।
तपाईले त आन्दोलनलाई बीचैमा छाडेर सरकारमा गएको आरोप छ नि ?
–मैले कुनै पनि आन्दोलन छाडेका छैन न मुद्दा छाडेको छु । न मधेशको मुद्दा छाडेको छु न थारुको मुद्दा छाडेको छु । हामीले उठाउँदै आएको माग अहिले पनि यथावत छ । र, त्यसका लागि हामी संघर्ष गरिरहेका छौ । सरकारमा जानु अघि दुई दलसँग गरेको आठ बुँदे सम्झौता पढ्नु भएको होला । त्यसमा प्रष्ट छ । हामी कुनै पनि मुद्दा छाडेका छैनौ । हामी संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टी भएका हुनाले संसदीय पद्दती अनुसार सरकारमा सहभागि भएका हौं । हामी सरकारमा गएर मुद्दा छाडेको र मधेशी थारुको अधिकारको कुरा नगरेको होइन । हामी सरकार, सदन र सडक तीनटै मोर्चामा संघर्ष गरिरहेका छौ । मधेश र थारुको माग पूरा गराउन सरकारमा पनि संघर्ष गरिरहेका छौ । सदनमा पनि गरिरहेका छौ र सडकमा पनि गरिरहेका छौ । अहिलेको मधेश आन्दोलनमा हाम्रो थुप्रै साथीहरु घाइते हुनु भएको छ र रौतहटमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता राजकिशोर ठाकुरको मृत्यू पनि भएको छ । हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवका छोरा विक्रम प्रहरीको गोली लागेर घाइते हुनुभएको छ । त्यसैले हामी सरकारमा गएपनि मुद्दा छाडेका छैनौ । जति आन्दोलन गरेपनि सहमतिको विकल्प छैन । वार्ताको विकल्प छैन र त्यसमा हाम्रो पहल रहेको छ ।
मधेशमा पार्टीले आन्दोलन गरिरहेका छन् भन्नुहुन्छ तर ती सबै जिल्लाका जिल्ला कमिटी सदस्य अध्यक्षहरुले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ भने आन्दोलन कसले गरिरहेका छन् ?
–हेर्नुस्, एउटा जिवित पार्टीमा कार्यकर्ता, नेता आउने जाने भइरहन्छन् । कोही छाडेर गएका छन् भने कोही आएका पनि छन्, त्यसलाई तपाईहरुले हेर्नु हुन्न । त्यसैले यसमा धेरै टिकाटिप्पणीको आवश्यकता छैन । अहिले पनि तराई मधेशमा हाम्रो थुप्रै कार्यकर्ता तथा नेताहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
मधेशवादी दलसँगको वार्ता भंग भएको हो त ?
–होइन, वार्ता भंग भएको छैन । सरकारी वार्ता समितिका संयोजक कमल थापाजी जेनेभा जानुभएको थियो त्यस कारणले यस्तो देखिएको थियो । उहाँ आउने वित्तिकै पुनः वार्ताको काम शुरु हुन्छ । वीरगञ्ज घटनाले केही अविश्वासको वातावरण सृजना भएको हो तर वार्ता शुरु भएपछि त्यो पनि हट्ने छ ।
(पत्रकारसँग गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा आधारित)
‘जेलभित्र इच्छुकलाई यातना दिएका ब्यक्ति अहिले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य छन्’ (अन्तर्वार्ता) चुनाव र वैकल्पिक शक्तिको भविष्यवारे डम्बर खतिवडासँग वारपार
वारपार : कुलमान घिसिङसँग (भिडियो अन्तर्वार्ता)
न्यायालय रूढीवादी संस्था हो (कृष्ण पोखरेलसँगको अन्तर्वार्ता)
वारपार : नेकपा क्रन्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’सँग
वारपार : उर्जामन्त्री जर्नादन शर्मा प्रभाकरसँग (भिडियो अन्तर्वार्ता)
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता जितेन्द्र सोनलसँग वारपार (भिडियो अन्तर्वार्ता)
दश बुँदे सहमतिपछि भरतपुरको मतगणना सुरु
दीपेन्द्र राई हिमालपारिका जिल्ला भनेर चिनिएको मुस्ताङलाई स्याउको राजधानी मानिन्छ । मुस्ताङलाई स..
अर्जुन पन्त काठमाडौ, जेठ १० – आफ्नै समर्थनमा बनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट सम..
‘दोस्रो विवाह गराएर घरपरिवारले सम्मान गरे’
चलचित्र क्षेत्रमा जीवनको रथ लामो समय गुडाउन नसकेका थुप्रै जोडी छन् । त्यस्तोमा कलाकार सरिता लाम..
‘नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी धेरै भए, महासंघीय ढाँचामा लैजाऔँ’
वनस्पतिविद् तीर्थबहादुर श्रेष्ठको जीवन : त्यतिबेला पाइन्ट लगाउनेलाई कांग्रेस भनिन्थ्यो
तराईमा नेपाली रुपैयाँ प्रचलनमा ल्याउने गभर्नर
‘जेलभित्र इच्छुकलाई यातना दिएका ब्यक्ति अहिले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य छन्’ (अन्तर्वार्ता) कवि तथा पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकको हत्या २०५९ जेठ १३ गते राज्य पक्षबाट भएको थियो । जनाद..
चुनाव र वैकल्पिक शक्तिको भविष्यवारे डम्बर खतिवडासँग वारपार
राजनीतिशास्त्रका विज्ञ कृष्ण पोखरेल राजनीतिक टिप्पणीकार पनि हुन् । राजनीतिशास्त्रको अध्..
Ananda Niketan (in front of Nabil Bank)Kupondole, Lalitpur